TV-yada Universal & Soomaali Channel, faracyada Puntland, oo shaqadii laga joojisay. – Radio Daljir
TV-yada Universal & Soomaali Channel, faracyada Puntland, oo shaqadii laga joojisay.
Garoowe, Oct, 31 – TV-yada caalamiga ah ee Soomali Channel iyo Universal ayaa maanta (Isniin) laga joojiyey shaqadii ay ka hayeen deeganada Puntland, ka dib markii lagu eedeeyey hawlo ka dhan ammka. Mas?uul ka tirsan wasaaradda warfaafinta ee Puntland ayaa Daljir u sheegay inay soo saareen wareegto labadaas TV shaqada looga joojinayo inkastoo aysan waraaqdaasi wali ku wareejin cidda ay ku socoto balse ay ku wargaliyeen.
Mas?uulka oo sheegay inuusan doonayn in magaciisa la xigto ama uu waraysi bixiyo ayaa Radio Daljir u sheegay in labada TV loo hayso warar ka dhan ah amniga Puntland, mana uu bixin wax faah-faahin ah oo intaasi dheer.
M/weynaha dawladda Puntland C/raxmaan Max?ed Faroole ayaa maanta khudbad uu jeediyey ku eedeeyey TV-yadaasi, waxaana uu TV-ga Soomali Channel si gaar ah ugu eedeeyey inuu xiriir la leeyahay Ururka Al-shabaab.
Axmed Cali Faarax oo ah madaxa TV-ga Soomaali Channel ee Puntland ayaa waraysi uu siiyey Radio Daljir ku sheegay inay la socdaan shaqo joojinta inkastoo aan wali wax qoraal oo arrintaasi ku saabsan la soo gaarsiin. Wuxuuna sheegay in xiriir ay dawladda la sameeyeen loogu sheegay inuusan jirin dambi gaar ah oo loo haysto wariyeyaasha Puntland ka shaqaaye balse ay arrintu tahay mid si guud TV-ga u qusaysa.